YeWatch yekuwachisa mawoko kuona kwaive makore mukugadzira | Ndinobva mac
Chimwe chinhu chakashamisa isu vedu vakaona chirevo chikuru cheApple Muvhuro wadarika, Chikumi 22, munhau dzeiyo watOS 7 inoshanda sisitimu ndiko kusvika kweyekushambidza mawoko basa. Mupfungwa iyi, izvo Apple zvaakatiratidza zvaive chishandiso chekurwisa huwandu hwehutachiona hwakatikomberedza uye chaizvo uye zvinosuruvarisa isu tiri kutambura kubva kune iyo iri kutora hupenyu hwakawandisa kutenderera pasirese, iyo coronavirus.
Zvinogona kutaridzika kuti Apple yakakurumidza kuve nechokushandisa kudzora imwe yemapoinzi akakosha kumisa denda, kugeza mawoko kwakanaka, asi hapana chingave chinowedzera kubva pachokwadi. Iri basa rekushambidza maoko rekuwacha harina kugadziridzwa nekukasira mukupindura kune zvazvino zvinodiwa, maererano naApple, kukura kwayo kwakatora makore akati wandei.
Mune ino kesi, iyo nyowani vhezheni yewatchOS 7 inozviona yega patinenge tichigeza maoko uye ndokutanga kuverenga-masekondi makumi maviri anotibvumidza kuziva inguva yekugeza kwakanaka. Iyo tekinoroji inoita kuti masenji ekufamba nemaikorofoni zvishande kana tageza maoko edu, ndosaka ichigadzirisa iyo timer neiyo kuverenga pasi. Ukapedza kare pane "zvinodiwa" wachi yacho inokuyambira kuti urambe uchigeza.
Iyi tekinoroji inosanganisa inofamba maseru uye maikorofoni eApple Watch yedu. Kune rimwe divi, watchOS 7 ichatiyeuchidza kugeza mawoko edu patinosvika kumba, kuitira kuti ruwoko rwedu ruve rwakakwana chero patiri. Zvinogona kupa fungidziro yekuti COVID-19 yakakonzera kusvika kwechishandiso ichi kana chishandiso paApple Watch, asi hapana chiri kumberi kubva pachokwadi zvinoenderana neTechCrunch chirevo chinotsanangura kuti vaive makore ekushanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » YeWatch yekuwachisa mawoko kuona kwaive makore mukugadzira
Nyowani "EvilQuest" rudzikunuro inotenderera mumapirati macOS maapp